Tag: eji ekwentị mkpanaaka | Martech Zone
Kpido: mkpanaka eji
You maara na ụmụ nwanyị nwere ike igwu egwuregwu na ekwentị ha, o yikarịrị ka ọ ga-amasị ụdị iji nweta azụmahịa ma yikarịrị ka ha ga-eji mobile na mgbasa ozi ọha na eze na-edebe taabụ na ezinụlọ ma na-ekwurịta okwu? Ihe dị iche iche nke nwoke na nwanyị gbara gburugburu ebe atọ dị iche iche: mmekọrịta onwe anyị na nke ọkachamara, mkpa maka ozi na ntụrụndụ, na omume ndị ahịa. Na ederede ahụ, anyị kwadebere ihe ọmụma a dabere na mpaghara ndị ahụ
Ndị ọrụ ịntanetị 2.4 dị n'ụwa dum na 70% ha na-eji ịntanetị kwa ụbọchị. Nke ahụ bụ 37.3% nke ọnụ ọgụgụ ụwa… mmụba nke 566% kemgbe afọ 2000. Ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ mkpanaka eji abanye na hasntanetị amụbawo okpukpu abụọ, na 38% nke mmekọrịta mgbasa ozi kwa ụbọchị na ekwentị. Ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ 139,000 na-aga n'ihu na-ezigara ozi ịntanetị 144 ijeri .68.8 88% nke ozi ịntanetị bụ spam! Google ka na-achịkwa ahịa ọchụchọ na XNUMX%